Saxeex Adeegyada Tarjumaadda Luqadda & Adeegyada
Adeegyada turjumaada Rois
Wax badan baa halkan ka muuqda. Marka waqtigaaga qaado, hareerahaaga fiiri, oo baro waxa jira oo dhan oo ah inaad naga ogaato. Waxaan rajeyneynaa inaad ku raaxeysaneysid degelkeenna oo aad daqiiqad qaadanayso si aad khadka noo dhigto.
Waxaan diyaar u nahay saacad kasta si aan u turjunno shaqadaada
Waxaan ku bixinaa adeegga degdegga ah ee 24hr ee shaqada degdegga ah, waxaan ku wareegeynaa 3 saacadood gudahood annaga oo leh khidmadda adeegga degdegga ah
Waxaa jira lacag uguyar meesha illaa 400 oo erey.
Marka aan nahay ROIS, waxaan jecel nahay inaan ka maqalno macaamiisheenna, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto ama aad noo soo dirto farriin annaguna waan kugu soo laaban doonnaa.
2021 ROIS International Ltd. Waxaa naqshadeeyay Ogambo
Qufulka qaranka: guriga joog Coronavirus (COVID ‑ 19) si dhakhso leh ayuu u fidayaa. Ha ka bixin gurigaaga haddii aan loo baahnayn. 1dii qofba 3 ee qaba fayraska malaha wax calaamado ah, marka waad fidi kartaa adiga oo aan ogayn.